WHO ရဲ့ ကိုရိုနာအရေး ကိုင်တွယ်ပုံကို စစ်ဆေးဖို့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေ ဆုံးဖြတ်
WHO ရဲ့ ကိုရိုနာအရေး ကိုင်တွယ်ပုံကို စစ်ဆေးဖို့ အဖ...
19 พ.ค. 2563 - 23:51 น.
အွန်လိုင်းကတဆင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးညီလာခံကို အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေ တက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကမ္ဘာ့ကပ်အရေး တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လွတ်လပ်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့တခု ဖွဲ့စည်းဖို့ WHO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေက သဘောတူ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ဂျီနီဗာမှာလုပ်တဲ့ နှစ်ပတ်လည် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးညီလာခံမှာ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အခန်းကဏ္ဍကို သူ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေက စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အတွက် ခွင့်ပြုတဲ့ အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကန့်ကွက်သူမရှိဘဲ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ၁၉၄ နိုင်ငံစလုံးက အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
WHO ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အမေရိကန်က အပြင်းအထန် ဝေဖန်နေတာပါ။
ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းကို ညီလာခံမှာ နိုင်ငံ ၁၀၀ ကို ကိုယ်စားပြုပြီး ဥရောပ သမဂ္ဂက တင်ခဲ့တာပါ။
နိုင်ငံတကာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေကို "ဘက်မလိုက်ဘဲ၊ လွတ်လပ်စွာနဲ့ ပြည်စုံတဲ့ အကဲဖြတ်ချက် လုပ်ဆောင်ဖို့" အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်က တောင်းဆိုထားပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကမ္ဘာ့ကပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး WHO ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှု အဖြစ်အပျက်တွေ ဖော်ပြတဲ့ အချိန်ဇယား ကိုလည်း အသေအချာကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ ပါဝင်ပါတယ်။ WHOဟာ ကမ္ဘာ့ကပ်အဖြစ် အရေးပေါ် ကြေညာတဲ့နေရာမှာ နောက်ကျခဲ့တယ်လို့ ဝေဖန်ခံနေရတာပါ။
ဒါ့အပြင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို ကုသနိုင်မယ့်ဆေးဝါး ဒါမှမဟုတ် ကာကွယ်ဆေးတွေ ထုတ်လုပ်နိုင်ရင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးအနေနဲ့ "ရှင်းလင်းမြင်သာမှုရှိရှိ၊ မျှမျှတတနဲ့ ရနိုင်တဲ့အချိန်မှာ အားလုံးတပြေးညီ" ရရှိခံစားခွင့်ရဖို့ အတွက်လည်း အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်က တောင်းဆိုထားပါတယ်။
WHO ဘာလို့ ဖိအားတွေအောက် ရောက်နေတာလဲ
သမ္မတထရမ့်က WHO ကို တရုတ်ရဲ့ ရုပ်သေးရုပ်လို့ သမုတ်ထားပြီး သူတို့ထည့်တဲ့ ရန်ပုံငွေတွေ ရပ်ပစ်မယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ WHO ကို ရန်ပုံငွေအများဆုံး ထည့်ဝင်တဲ့နိုင်ငံပါ။
သူက ဗိုင်းရပ်စ်စတင်ပျံ့နှံ့စဉ်က သတင်းတွေကို တရုတ်က ဖုံးထားခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲပြီး ဒါကို တရုတ်က အမြဲငြင်းပါတယ်။ ဒါ့အပြင် WHOဟာ တရုတ်က အဲဒီလို ဖုံးထားတာကို ဘာမှမပြောဘဲ နေခဲ့တယ်လို့ ပြောနေတာပါ။
တနင်္လာနေ့တုန်းက ကျန်းမာရေးညီလာခံမှာ အမေရိကန် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး အလက်စ် အေဇာက WHO ဟာ ကိုဗစ် - ၁၉ ရောဂါ ပြန့်ပွားတာကို လုပ်သင့်တာတွေကို မလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် "ထိန်းချုပ်လို့မရအောင်ထိ" ဖြစ်စေခဲ့ကာ "လူပေါင်းများစွာ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်" လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
လုပ်သင့်တာတွေကို WHO မလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ အမေရိကန် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးပြော
ကမ္ဘာမှာ ကိုဗစ် - ၁၉ ရောဂါ ကူးစက်ခံထားရသူ ၄.၈ သန်းရှိနေပါတယ်။ အမေရိကန်မှာတော့ ကူးစက်သူ ၁.၅ သန်း ကျော်နဲ့ သေဆုံးသူပေါင်း ၉၀,၀၀၀ ကျော်ရှိနေပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ဒီနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်မယ့် သမ္မထရမ့်ဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အရေး ကိုင်တွယ်ပုံနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြည်တွင်းမှာ ဝေဖန်ခံနေရချိန်မှာ သူ့အပေါ် အပြစ်ဖို့နေတာတွေကို လမ်းလွှဲနိုင်အောင် အခုလို WHO နဲ့ တရုတ်နိုင်ငံအပေါ် လက်ညှိုးထိုးအပြစ်ပုံနေတာလို့ ဝေဖန်ထောက်ပြနေသူတွေ ရှိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ယူကေ၊ ဩစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်တို့ အပါအဝင် အခြားနိုင်ငံတွေနဲ့အတူ ဥရောပသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကလည်း WHO က ကမ္ဘာ့ကပ်ကို ဘယ်လို အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့သလဲ ဆိုတာကို စုံစမ်းဖို့ တွန်းအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် အမျိုးသမီး ဗာဂျဲန်း ဘက်တု ဟန်နရစ်ဆန်က မေးစရာ မေးခွန်းတွေကအများကြီးပဲလို့ ဆိုပါတယ်။
"ကမ္ဘာ့ကပ် ဘယ်လို ပြန့်ပွားခဲ့လဲ" "ပြန့်ပွားတာကိုထိန်းချုပ်တဲ့ ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဗျူဟာတွေက ဘာတွေလဲ" "ဒါမှ နောက်ဒါမျိုး ကပ်တခုကြုံလာရင် ရှောင်ရှားစရာတွေကို သိလာရမှာ၊ အပြစ်တင်ဖို့ ကစားပွဲလုပ်တာမျိုး မဟုတ်ဘူး" လို့ ပြောပါတယ်။
WHO အကြီးအကဲက အဖွဲ့ရဲ့ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါအရေးကို ကိုင်တွယ်ပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆန်းစစ်ဖို့ကို အရင်ကတည်းက သဘောတူထား
WHO အကြီးအကဲ ဒေါက်တာ တက်ဒရို ဆန်ဒါနွမ် ဂက်ဘရီရက်ဆုက အဖွဲ့ရဲ့ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါအရေးကို ကိုင်တွယ်ပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆန်းစစ်ဖို့ကို အရင်ကတည်းက သဘောတူထားပြီးသားပါ။
ဒါပေမဲ့ အလုံးစုံကြီး ပြောင်းလဲဖို့ လိုတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ သူက ကန့်ကွက်ထားပါတယ်။
ဒေါက်တာ တက်ဒရိုက လွတ်လပ်တဲ့ အကဲဖြတ်ချက်တွေကို တတ်နိုင်သမျှ အစောဆုံး အခွင့်အရေးရတဲ့အချိန်မှာ လုပ်ဖို့လိုတယ်။ ဒီအကဲဖြတ်ချက်တွေကနေ သင်ခန်းစာတွေကို ထုတ်ယူပြီး ရှေ့မှာ ဘာဆက်လုပ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ အကြံပြုချက်တွေအတွက် အသုံးပြုရမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ရန်ပုံငွေ အပြီးရပ်ပစ်မယ်လို့ WHO ကို ထရမ့် ရာဇသံပေး
WHO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအချင်းချင်း စုစည်းအားဖြည့်ကြဖို့လည်း သူက တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းလောက်က တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါတွေဖြစ်တာ စတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဈေးတခုမှာ ရောင်းတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေကနေ လူဆီကို တဆင့် ကူးစက်လာပြီး ဗိုင်းရပ်စ်က စပျံ့နှံ့လာတာဆိုတဲ့ သတင်းတွေ အများကြီး ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီထက်အရင် သီတင်းပတ်တွေ အတော်စောစောပိုင်းကတည်းက ရောဂါတွေပျံ့နေတာဖြစ်ပြီး တရုတ်က ဒီသတင်းတွေကို ဖုံးဖိထားတာလို့ အစွပ်စွဲခံနေရပါတယ်။
အမေရိကန်ထိပ်တန်း နိုင်ငံရေးသမားတချို့က ဗိုင်းရပ်စ်ထွက်လာတဲ့အရင်းအမြစ် အစက ဝူဟန်မှာရှိတဲ့ ဓာတ်ခွဲခန်းတခုကနေ ဖြစ်တယ်၊ အဲဒီ ဓာတ်ခွဲခန်းက လင်းနို့တွေကို သုတေသနလုပ်နေကြတဲ့ ဓာတ်ခွဲခန်းလို့ ပြောနေကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီ စွပ်စွဲချက်တွေကို တရုတ်က ငြင်းပယ်ထားသလို အနောက်နိုင်ငံက ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကလည်း အဲဒီ အမေရိကန်တွေ စွပ်စွဲချက်အပေါ် သံသယ ရှိကြပါတယ်။
တရုတ် သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်က သူတို့နိုင်ငံဟာ ဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်ပွားမှုအရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး "ပွင့်လင်းမှုရှိရှိ၊ ရှင်းလင်းမြင်သာမှုရှိရှိ" လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်၊ အခုဖြစ်နေတဲ့ ကမ္ဘာ့ကပ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ချိန်ရောက်မှသာ စုံစမ်းစစ်ဆေးတာတွေကို လုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့ တနင်္လာနေ့တုန်းက ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးညီလာခံကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ WHO ရဲ့ ကိုရိုနာအရေး ကိုင်တွယ်ပုံကို စစ်ဆေးဖို့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေ ဆုံးဖြတ်